Dahaarka Fasalka Mica Powder, Qurxinta Fasalka Mica Powder, Pearlescent Mica Powder - Huajing
Badanaa waxay ku hawlan tahay farsamaynta ganaaxyada macdanta aan birta ahayn, oo ay ku jiraan mica dabiiciga ah, mica synthetic, macdanta shaqada, iwm.
Fasalka Qurxinta - Muscovite Dabiiciga ah Mica Powder
Fasalka Dahaarka - Maadada Mica Powder
Fasalka Dhismaha Warshadaha - Calcined Mica Powder
Fasalka Caaga ah - Mica Powder Synthetic
Fasalka Balaastikada - Maadada Mica Powder
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., oo la aasaasay 1994, waxay leedahay taariikh 27 sano ilaa hadda ah. Waa shirkad wax soo saar u janjeedha oo inta badan lagu sameeyo farsamaynta farsamooyinka macdanta nonmetallic oo ay ku jiraan mica-ga dabiiciga ah, mica synthetic, macdanta shaqada iwm. taxanaha fasalka oo dhan. Shirkaddu waxay dejisay laba xarun cilmi-baaris iyo horumarineed oo ku yaal dhinacyo kala duwan, taas oo ah inay bixiso taageero farsamo oo xoog leh oo loogu talagalay wax soo saarka warshadaha iyo qalabka aasaasiga ah ee qurxinta.
Huajing waxay leedahay koox xirfadlayaal ah oo ka kooban ku dhowaad 100 xubnood oo u heellan soosaarka iyo soo saarista wax soo saar tayo sare leh oo ka yimaada mica iyo waxyaabaha kale ee macdanta laga helo.
Shirkaddu waxay u hoggaansameysaa istiraatiijiyadda tayada sare leh iyo horumarka waara waxayna qaadataa hal-abuurnimo cilmiyeed iyo farsamo ahaan iyada oo ah tartankeeda asaasiga ah.
Shirkaddu waxay leedahay laba xarumood oo R & D ah oo ku yaal dhinacyo kala duwan si ay u siiyaan taageero farsamo oo xoog leh soo-saarka warshadaha iyo qurxinta alaabada aasaasiga ah.
Soo saarida mica synthetic, adeegsiga macdanta shaqeyneysa waxay leedahay faa iido farsamo oo horseed ah
Qalabka Dhismaha iyo Dharka
Balaastikada Elektarooniga ah
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan wararkayaga
Huajing waxay u hoggaansan tahay fikradda nidaamka maaraynta horumarsan
Maareynta warshaddeeda waxay waafaqsan tahay ISO9001: 2015 nidaamka maaraynta tayada, ISO14001: 2015 ...
Runta ku saabsan enviro ...
082020 / Sebt
Horumarinta iyo codsashada ...